Dutchtown, St. Louis, MO • Wax kasta oo aad uga Baahan Tahay Inaad Ka Ogaato Dutchtown
Ku soo dhowow Dutchtown!
Dutchtown waa xaafaddeena ku taal dhinaca Koonfureed ee St. Louis, oo hoy u ah taariikh badan iyo mustaqbal isbeddelaya. Waxaan nahay St. Louis xaafada ugu dadka badan uguna cufan. Waxaan soo dhaweyneynaa kala duwanaanta deriskeena waxaanan leenahay qorshayaal waawayn oo aan Dutchtown uga dhigno meel fiican oo lagu noolaado qof walba iyadoon loo eegin jinsiyad, xaalad dhaqaale, sooyaal diimeed, ama arrimo kale. Waxaan nahay Dutchtown Faan.
Waxaan boos u helnay qof kasta oo raba inuu ka mid noqdo xaafad adag oo dardar badan leh. Kaalay oo na soo booqo — waxaan jeclaan lahayn inaan ku tusno agagaarkaaga. Albaabka naga xiga. Meeshaada ka fur. Maal gasho mustaqbalka xaafadeena. Waxbaa jira qof walba oo jooga Dutchtown.
Waxaan haynaa liis ballaaran oo ah xaafadda iyo kheyraadka magaalada, oo lagu daray tilmaamaha la xiriirida Xafiiska Adeegga Muwaadiniinta, la shaqaynta Khabiirkaaga Horumarinta Xaafadaha, gudbinta warbixinnada booliska, Iyo in ka badan.
Bookmark dutchtownstl.org/resources tixraac anfacaya.
Ma xiiseyneysaa inaad ka caawiso sidii Dutchtown looga dhigi lahaa meel fiican oo lagu noolaado? Ka mid noqo gudiyadayada:
Faahfaahin intaas ka badan ka hel oo iska qor dutchtownstl.org/committees.
Wax Ka Baro Dutchtown
Akhriso taariikhdeena, dadkeena, qaab dhismeedkayaga, jardiinooyinkeenna, iyo inbadan oo kusaabsan Ku saabsan Dutchtown .
Taageerida Ganacsiyada Dutchtown
Waxaan soo aruurineynaa kheyraad waxaanan soosaaraynaa hagitaano horumarineed oo kugu caawinaya adiga iyo ganacsigaagaba inaad guuleysato Booqasho dutchtownstl.org/business ama fiiri koritaankeena liiska kheyraadka iyo annaga Tilmaamaha ku-helitaanka Google.
Futsal -ka Marquette Park
Fiiri maxkamadda futsal -ka cusub ee Marquette Park! Baro sida loo ciyaaro oo loo akhriyo iskaashiga aan la leenahay St. Louis CITY SC iyo taageerayaasha kale.
Dhammaan wararka, ilaha, iyo macluumaadka ku saabsan DutchtownSTL.org hadda waxaa lagu heli karaa Isbaanish, Fiyatnaamiis, Carabi, Nepali, iyo in ka badan! Guji Translate badhanka dusha sare ee bogga.
Deriska is yaqaan oo is fiiriya ayaa laf dhabar u ah bulsho xoog leh. Baloog abaabulan, si kasta oo si rasmi ah ama aan rasmi ahaynba loo abaabulay, wuxuu kordhiyaa nabadgelyada, wuxuu hagaajiyaa bilicsanaanta, wuxuu soo jiitaa deriska cusub, waxna waa loo qabtaa. Baro sida loo abaabulo dhismahaaga dutchtownstl.org/blocks.
Waan helnay ilaha kaa caawinaya inaad la fal gasho, la xiriirto, oo aad wax xirto deriskaaga inaad is abaabusho.
Deeqaha Ganacsiyada Yaryar
Ganacsigaaga saameyn ma ku yeeshay COVID-19? Ka ogow deeqaha laga heli karo Magaalada St. Dutchtownstl.org/grants.
Ku deeq Waddooyinka waaweyn ee Dutchtown
Ku noqo deeq bixiye Wadooyinka Waaweyn ee Dutchtown! Doollar kastaa wuxuu ka caawiyaa Waddooyinka waaweyn ee Dutchtown xagga himiladeenna ah inaan u dhisno Dutchtown kobcaya dhammaan degganeyaashayada, milkiilayaasha meheradaha, iyo daneeyayaasha kale. Samee tabaruc hal mar ah ama soo noqnoqda.
Beerta ugu weyn deegaanka Dutchtown, waxaan ka shaqeyneynaa inaan sameyno Beerta Marquette xarunta dhexe ee xaafadeena. Soo ogow waxa ka socda beerta nasashada iyo sida aad u caawin karto Isbahaysiga Marquette Park dib u hawlgeli beerta nasashada.
Had iyo jeer waxbaa ka dhacaya Dutchtown! Booqasho dutchtownstl.org/calendar si loo helo kulamada xaafadaha, fursadaha iskaa wax u qabso, fasalo, saacado farxadeed, iyo siyaabo kale oo badan oo loo maro bax oo la kulan deriskaaga.
Raadi wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato waxa ku saabsan Degmada Horumarinta Bulshada ee Dutchtown iyo sida aad uga qayb qaadan karto.
La xiriir DutchtownSTL
Ma ka heli kartaa waxaad u baahan tahay halkan DutchtownSTL.org? Nala soo xiriir oo waxaan isku dayi doonaa inaan ku caawino. Sidoo kale waad sameyn kartaa iska qor liistadayada boostada si aad ula socoto wixii ku soo kordha Dutchtown.
Waan helnay macluumaad loogu talagalay codbixiyaasha Dutchtown oo ay ku jiraan taariikho muhiim ah, macluumaadka musharraxa, iyo sida looga diiwaan geliyo Dutchtownstl.org/vote.
Ku xafid Dutchtown qurux adigoo ku tabarucaya dhacdooyinka nadiifinta agagaarka xaafadda. Booqasho dutchtownstl.org/cleanup inaad hesho fursad aad ku caawiso.
Waxaan ku jirnaa dhamaan barnaamijyada warbaahinta bulshada ee aad ugu jeceshahay! Nagala soco warar, dhacdooyin, sawirro, fiidiyowyo, iyo inbadan oo ka socda agagaarka Dutchtown!
Ka hel warar dheeraad ah Dutchtownstl.org/wararka
Akhri inta soo hartay "Warbixinta Sannadlaha ah ee Waddooyinka Weyn ee Dutchtown 2021"
Kooxda Horumarinta Lutheran waxay wax ka qabataa gees kale oo adag
Horumarinta Dutchtown-ku salaysan Kooxda Horumarinta Lutheran had iyo jeer waxay u taagan tahay tartan. Dhamaadka dabada ee 2021, LDG iyo la-hawlgalayaashooda Horumarinta Bulshada ayaa ku dhawaaqay in ay dhaqaale u sugeen Mashruuca Guryaha Marquette, ku darida 60 guri oo la awoodi karo oo dhan 14 dhismayaal aad u xumaaday iyo meelo banaan oo ku yaal Dutchtown iyo Gravois Park. Intaa ka hor, iskaashigani waxa uu dib u soo nooleeyay 15 dhisme oo xaafadda ku yaalla oo ay la socdeen Mashruuca Chippewa Park. Hadda waxay ku dhawaaqeen la wareegida oo ay qorsheeyeen dib u habayn lagu samaynayo guri muddo dheer dhibaato ka jirtay oo ku taal 3025 Chippewa Street.
Akhri inta soo hadhay "Kooxda Horumarinta Lutheran waxay wax ka qabataa gees kale oo adag"
Deeqaha Hagaajinta Facade ee Meheradaha Dutchtown
Wadooyinka Waaweyn ee Dutchtown'Guddiga Naqshadaynta iyo Degmada Horumarinta Bulshada ee Dutchtown waxaan rabaa in aan kaa caawiyo kor u qaadida dukaankaaga! Meheradaha ku dhex jira CID raadkeeda waxay codsan karaan deeqo gaaraya ilaa $500 hagaajinta jireed ee wejiyadooda u jeeda wadada. Albaabada hore ee ganacsiyadayada ayaa ah albaabada laga soo galo Dutchtown ee dad badan oo soo booqda, iyo albaab soo jiidasho leh ayaa soo jiidata dhaqdhaqaaq dhaqaale oo muujinaya dabeecadda xaafadeena.
Akhri inta hadhay ee "Deeqooyinka Hagaajinta Facade ee Meheradaha Dutchtown"
Qaybsiga Dutchtown, Volume One
Ku soo dhawoow cadadka kowaad ee Dutchtown Dividend, warside saddex biloodle ah oo loogu talagalay bulshada ganacsiga Dutchtown! Waxaan halkaan u nimid inaan idinla socodsiino waxa ka socda Wadooyinka Waaweyn ee Dutchtown iyo inaan ku ogeysiiyo agabka iyo fursadaha ay heli karaan ganacsiyada maxalliga ah. Haddii aad jeclaan lahayd inaad ku hesho macluumaadkan sanduuqaaga, email noogu soo dir info@dutchtownstl.org.
Akhri inta hadhay ee "Qaybta Dutchtown, Volume One"